१५ ओटा धितोपत्रको शेयरमूल्य उच्च दरमा वृद्धि
जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण
भदौ २७, काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबार दिन आइतवार बजार अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ७१ दशमलव ४३ अंकले बढेको छ ।
यस दिन कारोबारमा आएका २३१ ओटा कम्पनीमध्ये १५ ओटा धितोपत्रको शेयरमूल्यमा उच्च दरले वृद्धि भएको हो ।
नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी,राष्ट्रिय बीमा कम्पनी,फष्र्ट माइक्रोफाइनान्स,अपि पावर कम्पनी, अरुण काबेली पावर, छ्याङदी हाइड्रोपावर,पाँचथर पावर कम्पनी,लिवर्टी इनर्जी कम्पनी, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको संस्थापक शेयर र सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सको शेयरमूल्य १० प्रतिशतका दरले वृद्धि भएको छ ।
त्यसैगरी हिमालयन पावर पार्टनरको शेयर मूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा आइतवार ९ दशमलव ९८ प्रतिशत,सिनर्जी पावर डेभलपमेण्ट कम्पनीको ९ दशमलव ७९ प्रतिशत,ङादी ग्रुप पावरको ९ दशमलव ६२ प्रतिशत,शिवश्री हाइड्रोपावरको ९ दशमलव ६० प्रतिशत र नेपाल हाइड्रो डेभलोपर्सको शेयर मूल्य ९ दशमलव ११ प्रतिशतका दरले वृद्धि भएको छ ।
ती १५ ओटै कम्पनीको शेयरमा विक्रेताभन्दा क्रेता धेरै भएकाले शेयरमूल्य बढेको हो । नेपाल हाइड्रो डेभलोपरको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू.६८३, शिवश्री हाइड्रोपावरको रू.४७० दशमलव २०,ङादी ग्रुप पावरको रू. ८५५ र सिनर्जी पावरको शेयरमूल्य रू.६१७ पुगेको हो ।
त्यसैगरी नेशनल हाइड्रोपावरको शेयर मूल्य रू.४६७ दशमलव ५०,राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको रू. २० हजार १३२ दशमलव २०,फष्र्ट माइक्रोफाइनान्सको रू. १ हजार ११७ दशमलव ६०,अपि पावरको रू. ५४४ दशमलव ६०,अरुण काबेलीको रू. ६५५ दशमलव ६०,छ्याङदी हाइड्रोपावरको रू. ६२५ दशमलव ९० पुगेको छ ।
यसैगरी पाँचथर पावरको रू. ५४२ दशमलव ३०,लिवर्टी इनर्जीको रू. ४५९ दशमलव ८०,सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सको रू. ६०१ दशमलव ८० र हिमालयन पावर पार्टनको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ६४३ दशमलव ६० पुगेको हो । योदिन अधिकांश जलविद्युत कम्पनीको शेयर उच्च दरमा वृद्धि भएको छ ।
जलविद्युत् समूहको परिसूचक ६ दशमलव ३७ प्रतिशत बढेको छ । केही समय अगाडि ३ हजार २०० को आसपासमा बजार पुगेर आरोलो लागेको थियो । घटेको बजारमा पुन : खरीदकर्ता आकर्षित हुँदा पनि आइतवार बजार बढेको देखिन्छ ।
त्यसोत जलविद्युत् समूहको परिसूचक ३ हजार ३०३ दशमलव २५ को विन्दुबाट बलियो टेवा पाएर बढेको बजार विश्लेषकले बताएका छन् ।